केही जानकारी सैार्य मण्डलको बारेमा, - Ddus Gajurel Blogs
केही जानकारी सैार्य मण्डलको बारेमा,
on Friday, March 19, 2010 in जानकारी, बिज्ञान
ब्लगतिर नहेरेको धेरै भएछ । अस्ती घरजादा पुराना डाइरीहरू फेला भए । हेर्दै जाँदा धेरै कामका कुराहरू भेटे । यहाँम धेरै पहीले मैले कलेक्सन गरेको एउटा जानकारी पस्कदै छु ।
कुन ग्रह ले सुर्यलाइ चक्कर लाउदा कती समय लाउछन भनेर यस पोष्टमा पस्कदै छु ।
ब्रक्हाण्डमा नैा वटा ग्रहहरू छन । ति ग्रहहरूको पनी उपग्रह हरू छन । ति ग्रह र उपग्रहहरूले सुर्यलाइ आफ्नो कक्षमा परिक्रमा गरी रहेका हुन्छन ।
हाम्रो सैाय मण्डलमा रहेका ग्रहहरूको कति कति उपग्रहहरू छन ?,
ग्रहहरूले कति दिनमा सुर्यलाइ परीक्रमा गर्छन ?
८८ दिन (88 Days)
२२५ दिन ( 225 Days )
३६५ दिन (365 Days )
६८६ दिन (686 Days)
बृहस्पति (Jupiter )
११.९ वर्ष (11.9 Years)
शनी (Saturn )
२० वा त्यो भन्दा बढी
(More Then 20)
२९.५ वर्ष (29.5 Years)
८४ वर्ष (84 Years)
१६४.८ वर्ष (164.8 Years)
२४८ वर्ष (248 Years)
Labels: जानकारी, बिज्ञान
Anonymous March 23, 2010 at 2:01 AM
सानामा पढेको कुरा फेरी ताजा भएर आयो...यस्तो बिशाल र अनौठो ब्रम्हाण्डमाको बारे देख्दा सोच्दा कहिले कहिँ यसै रोमान्चक अनुभूति भएर आउँछ... धन्यबाद
रमेशमोहन अधिकारी March 27, 2010 at 7:26 PM
वैज्ञानिकहरूले कहिलेकहिले आठवटा ग्रह भनेजस्तो पो लाग्छ त !
Anonymous April 1, 2010 at 10:02 PM
भन्न त १० वटा पनि भन्टन तर मैले सानै देखी पढ्दा ९ वटा पढेको हो